Mudisho: Milateriga oo toogtay labo hubeysan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ciidamo ka tirsan milateriga Soomaaliya ayaa xalay degmada Hodon ku dilay labo nin oo la sheegay iney qoryo wateen, islamarkaana warar kala duwan kazoo baxyaan cidda ay ahaayeen.
Gudoomiyaha degmada Hodon, C/qaadir Cali Kulane oo ka hadlay dilka labadan nin ayaa sheegay in ragaas lagu soo eedeeyey iney dhac ka geysan jireen agagaarka Taleex oo ka tirsan degmada uu gudoomiyaha ka yahay.
Wuxuu sheegay Kulane in iyadoo ciidamada booliska Hodon ku raadjoogaan ragaas ay si lama filaan ah u kulmeen dableydaas iyo ciidamo milateri ah oo wadada marayay, is-rasaaseyn kadibna labadaas nin la dilay.
“Ragaas waxaa loo heystay iney tuugo ahaayeen oo deegaanka Taleex dadka uga dhici jireen mobile-da iyo Laptop-yada, iyadoo booliska iyo nabadsugiddu raadinayaan ayaa iyaga milateri isku dhaceen kadib markii dadku milateriga wargeliyeen, is-rasaaseyn kadibna labadaas nin waa la dilay” ayuu yiri gudoomiyaha degmada Hodon, C/qaadir Cali Kulane oo la hadlay KNN.
Kulane ayaa sheegay in booliska degmada Hodon uu faafaahin dheeraad ah ka dalbaday milateriga dilay labadaan, wuxuuna xusay in meydka labada nin la geeyey xarrunta dambi barista ee CID, kadibna loo gudbiyey Isbitaalka Madiina.
Gudoomiyaha oo la weydiiyey warar soo baxay oo sheegaya in ragga la dilay ay ilaalo u ahaayeen shirkad ajanabi ah ayaa sheegay inuusan arrintaas ka warheyn.